Izibonelelo zeSokisi ezingabonakaliyo | Amadoda aQinisekileyo
Pringle Iikawusi ezingabonakaliyo
Los Iibhulukhwe ezinde zamaqatha okanye izikhephe zokuloba ziya kuba sisiqhelo kule ntwasahlobo-ehlotyeni. Kwaye iikawusi ezingabonakaliyo ziindawo zokuhamba ezifanelekileyo kubo. Ngoba?
Los iikawusi ezingabonakaliyo bashiya zombini iqatha kunye ne-instep ibhenciwe, esivumela ukuba sinike imbonakalo yokungazinxibi iikawusi xa enyanisweni sizinxibile.
Umahluko phakathi kokunxiba iikawusi ezingabonakaliyo nokunganxibi iikawusi ihlala kuloo nto iyanceda ukugcina ngaphakathi kwesihlangu ekonakaleni okuveliswa kukubila. Ikwanqanda namadyungudyungu ekubonakaleni ezinyaweni nakwezinye iingxaki zolusu ezinokubangelwa kukunxibelelana ngokuthe ngqo phakathi kwayo kunye nezinto ezahlukeneyo ngaphakathi kwezihlangu.
Ixabiso eliphantsi ngoMvulo Chinos eAsos - 59,99 euro
Ukuba sizithelekisa neekawusi eziqhelekileyo, zikwanazo nezinye ezintle. Abanye abantu bakhetha ukuziqengqa ngaphakathi ukuze zingabonakali, kodwa oko kunokubangela ukuba isihlangu sikhule ngakumbi kunokuba kufanelekile kwindawo ye-instep, ingxaki engekho ngeekawusi ezingabonakaliyo.
Umkhwa wokunxiba amaqatha angenanto Kungasebenza kakhulu kwaye kuyathandeka ukuba kwenziwe ngokumodareyitha (sicebisa ukuba singagqithi kubude obuthile kwaye sikwenze kuphela kwiindawo ezishushu), kodwa ukuba ufuna ukuyilandela kubalulekile ukuba ube neeperi ezimbalwa zeekawusi ezingabonakaliyo idrowa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Iikawusi ezingabonakaliyo, amaqabane afanelekileyo ngeebhulukhwe zamaqatha
Ixabisa malini itattoo?